Oniversite Antananarivo: fepetra hentitra ho an’ny halatra jiro sy rano | NewsMada
Oniversite Antananarivo: fepetra hentitra ho an’ny halatra jiro sy rano
Natao sonia, omaly, ny fifanarahana eo amin’ny Jirama sy ny oniveristen’Antananarivo, tamin’ny alalan’ny tale jeneraly ny Jirama, Andriamanga Vonjy, sy ny filohan’ny oniversite, Ravelomanana Mamy. Voakasik’izany ny fitsirihana sy ny fanamarinana ny fampiasan-jiro sy rano tsy ara-dalàna eny amin’ny trano fianarana sy ny toeram-ponenan’ny mpianatra. Isan’ny paikady iraisan’ny roa tonta ny fampahafantarana sy ny fanentanana ny mponina, voakasika sy ny manodidina ny oniversite Ankatso, mikasika ny asa hatao sy ho fisorohana ny fampiasan-jiro sy rano tsy ara-dalàna.
Voafaritry ny fifanarahana fa hosahanin’ny oniversite Antananarivo ny fandoavana ny saran-jiro sy rano tokony hefainy. Hamorainy koa ny fidiran’ny mpiasan’ny Jirama, hiditra any amin’ny oniversite sy hitety trano hanara-maso. Hiantoka ny fitaovana ilaina amin’ny fitsirihana kosa ny Jirama, sady hametraka kaontera jiro sy rano misaraka isaky ny trano eny amin’ny oniversite. Hametraka siniben-drano ihany koa hampitomboana ny filan’ny mpanjifa. Hamoraina koa ny fandoavan’ny oniversite ny trosany amin’ny Jirama. Haharitra telo taona ity fifanarahana ity.
Ankoatra izany, vita sonia, omaly, koa ny fifanarahana eo amin’ny oniversite Antananarivo tamin’ny alalan’ny Ivontoerana manara-maso ny jeofizika Antananarivo (Ioga), sy ny Foibe manangona ny vaovao amin’ny sehatry ny ranomasina (CFIM). Mifantoka amin’ny fiarovana an-dranomasina sy ny tontolo iainana an-dranomasina ary ny fampiroboroboana ny Toekarena manga izany.